Pfungwa yakanaka kune zvese inokupa hupenyu hunofadza. - Anotungamira - Quotes Pedia
Tariro inoita kuti tirambe tichienda. Izvo zvinotipa simba rekutarisira kumberi kunyange munguva yenhamo. Muhupenyu, zvinhu hazvizombofamba sezvakarongwa. Yese nzira dzinenge dziine kutsauka asi isu tinofanirwa kuramba takamira uye kukurira izvo zvinhu izvo zvinouya sechinhu chipingamupinyi.
Hatifanirwe kuora mwoyo kana kunzwa kuti zvese izvo zvisiri izvo zviri kuitika kwatiri chete. Tarisa uone. Wese munhu ane chake chikamu chematambudziko. Asi hupenyu hwakamira kubudikidza navo uye vachiri kuwana mufaro.
Kurarama hupenyu hunonakidza uye kugutsikana, zvakakosha kuti isu tive nepfungwa dzakanaka. Zvinotipa kurudziro yekutarisira kumberi uye nekuita zvinhu zvataisazofunga nezvazvo.
Ushingi, kukurudzira uye moyo kuti uite zvakanaka zvinogona kutitorera zvinhu zvisinga fungidziki. Kana isu tichinzwa kubatikana pasi, zvinogara zvichibatsira kuzvikomberedza nemafungiro akanaka uye vanhu vakanaka.
Ivo vanotikurudzira kuti tikwanise kutsungirira nematambudziko edu. Kunyangwe tikasawana vamwe vakatikomberedza, isu tinofanirwa kutsvaga mukati medu simba rekurwisa matambudziko edu. Nekufamba kwenguva, simba iri rinowedzera uye rinotiita munhu akatsunga.
Kana isu tiine pfungwa dzakanaka uye tikadzidza kutarisa mumativi akanaka ezvinhu zvimwe, ipapo mufaro unovapo nenzira yedu. Isu tinodzidza kukoshesa uye kuve nekuonga nekuda kwezvatinazvo. Isu tinokoshesa zvinhu zvakanyanya uye tinozvifarira zvakanyanya uye mufaro unowedzera mitezo yakawanda. Saka, isu tinozviona kufara uye kugutsikana muhupenyu.
Hupenyu Hwakawedzera Quotes
Yakajeka pfungwa Quotes
Yakanaka Yekusetesa Quotes
Chinhu chandakadzidza nezve vanhu ... Kana vachizviita kamwe chete, vanozozviita zvakare. - Asingazivikanwe
Ini ndakadzidza chimwe chinhu nezve vanhu panguva yese iyi, uye ndiko kuti, kana mumwe munhu achigona kuita…
Usape vanhu mhosva yekukuodza moyo. Zvipe mhosva nekutarisira zvakawandisa kubva kwavari. - Asingazivikanwe
Usape mumwe munhu mhosva yekukuodza moyo nekuti imhosho yako kuva nezvakawanda zvinotarisirwa kubva ku…
Usapise mikana yako yekunyaradzwa kwenguva pfupi. - Asingazivikanwe
Muhupenyu, haugone kubudirira zviri nyore kudaro! Unofanirwa kutora bvunzo dzinoverengeka pamwe…